आईफोन अलार्म समय परिवर्तन संग असफल हुन सक्छ आईफोन समाचार
आईफोन अलार्म समय परिवर्तन संग असफल हुन सक्छ
Ngarcia 2.0 | | iOS 3, आईफोन
एकपटक फेरि एप्पलसँग आईफोन अलार्मको समस्या छ, जस्तो देखिन्छ कि यसले युनाइटेड किंगडमका केही प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र असर गरिरहेको छ।
यस समयमा त्यहाँ धेरै जानकारी छैन, यद्यपि यो अनुमान गरिएको छ कि यो आईओएस 4.3 मा बगका कारणले हुन सक्छ।
के तपाईंहरूमध्ये कसैले आईफोन अलार्मको साथ समस्या फेला पार्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS3» आईफोन अलार्म समय परिवर्तन संग असफल हुन सक्छ
यो मलाई भएको छ।
मसँग संस्करण 4.1..१ छ, र यसले मलाई चल्दैन
म परीक्षणहरू गर्दैछु, र यो मेरो लागि काम गर्दछ यदि मैले प्रत्येक दिन यसलाई ध्वनिमा कन्फिगर गरेमा।
मैले हप्ताको लागि उत्पन्न गरेको अलार्महरू ध्वनि गर्दैनन्, त्यसैले म तिनीहरूलाई पूरै हप्ताको लागि सेट गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई शनिबार र आइतवारहरूमा निस्क्रिय पार्नु पर्छ।
अनुग्रह, तर कम्तिमा मसँग यो पहिले नै बाँधिएको छ, किनकि हिजो म कामको लागि ढिलो भइसकेको थियो
Nacho लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन4र 4.2.1.२.१ मा अलार्महरू जुन मैले प्रोग्राम गरेको छु त्यो अझै पनि पुरानो समयमा जम्प गर्दै थियो। जे होस् यो 7::30० यो 6: .० बजे देख्यो अर्को शब्दमा, यो अद्यावधिक भएन।
पोटामसलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि मलाई यो भयो भने, म भेनेजुएलाबाट छु र कहिलेकाँही यो आधा घण्टा पछि घण्टी बज्छ।
म कहिले यो आधा घण्टा र कहिले काँही एक घण्टा हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न सकेको छैन, तर तिनीहरू कहिले पनि बज्दैनन् जुन मैले यो प्रोग्राम गरेको हो, वास्तवमा मैले पहिलो पिढीको आईफोन अलार्म घडीको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ किनभने आईफोन4मेरो लागि काम गर्दैन
रोड्रिगोलाई जवाफ दिनुहोस्
खैर, मेरो, 4.१ र जेलब्रेकको साथ आईफोन ... ... म दुई दिन अगाडि एक घण्टा सम्म उठें। मैले फेरि पनि अलार्महरू पुन: प्रोग्राम गर्नुपर्‍यो किनभने उनीहरूले एक घण्टा अगाडि भने
खैर, समय परिवर्तन पछि उसले मलाई एक घण्टा पहिले उठाउँछ। iPhone.१ मा आईफोन
Feysil लाई जवाफ दिनुहोस्
एडगर 69 मिक्स भन्यो
यसले मेरो लागि राम्रो काम गरिसकेको छ, सोमबारदेखि मलाई दोस्रो अलार्म घडी लागेको छ यदि उड्यो तर आईफोन अहिलेसम्म असफल भएको छैन !!
Edgar69mix मा जवाफ दिनुहोस्
म बार्सिलोनाबाट हुँ र मसँग संस्करण 4.1..१ जेलब्रेकको साथ छ र मसँग अलार्मको समस्या पनि छ। केवल ती ती समयावधि निर्धारित छैनन् जुन मेरो लागि काम गर्दछन्, तर केवल एक पटक मात्र ध्वनि गर्न। अरु सबै मसँग १ घण्टा अघि बज्छन्।
मलाई थाहा छैन तपाईं के सोच्नुहुन्छ, तर म यसलाई एप्पल जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीको पक्षमा निकै दयनीय पाउँदछु, कि जब हरेक समय परिवर्तन हुन्छ उही समस्या आउँछ। के तिनीहरूले एक पटक र सबैका लागि यसलाई ठीक गर्न सकेनन्? त्यो भने, दयनीय छ।
म्यानुएललाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग 4.2.1.२.१ र आईफोन no को साथ कुनै समस्या छैन। मैले समय स्वचालित रूपमा परिवर्तन गरें र अलार्महरूले राम्रोसँग कार्य गर्न जारी राख्यो र मलाई समयमै ब्यूँझाउछ ... मैले ती काममा XDDD लाई दोष दिन गलत भएको भए म आपत्ति मान्दिन।
Tharos लाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई पनि भएको छ। यो एक घण्टा अघि, पुरानो समयमा बज्छ। तर यो तब मात्र हुन्छ जब यो अलार्म केहि दिनको लागि तालिकाबद्ध गरिएको छ, यदि म अलार्म प्रयोग गरिरहेको छु यदि यसलाई दोहोर्याईकन ठीकसँग कार्य गर्दछ।
मसँग I.१ संस्करणको आईफोन छ।
एन्टोनियोलाई जवाफ दिनुहोस्
म मनुएलसँगै छु ... यो एप्पललाई लाजमर्दो छ, हामी कसै-कसैले यस उपकरणको लागि लगभग € 300 तिर्ने गरी तिरेको छ ताकि यो समय अपडेट गर्न जत्तिकै सजिलो काम गर्दैन। खैर, मसँग आईफोन4छ जैकब्रेक र 4.1.१ सँग
Alvaro लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन4छ 4.2.1.२.१ र जेलब्रेक गरीएको, पुरानो अलार्मलाई परिमार्जन नगरीकन यसले मलाई ठीक समयमा ध्वनि गरेको छ।
Igres लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मलाई कुनै समस्या भएको छैन, समय स्वत: परिवर्तन भयो र अलार्म सही समयमा बज्‍यो, मसँग आईफोन have.4 छ IOS 4.3. have
नाइट्रोसलाई जवाफ दिनुहोस्
अलार्मले तिनीहरूलाई पुनःप्रोग्राम नगरी आइतवार र सोमबार मेरो लागि राम्रोसँग काम गरेको छ, हिजो मैले ती सबैलाई हटाएको थिएँ र मैले तिनीहरूलाई फिर्ता राखिदिएँ र आज बिहान यो एक घण्टा अगाडि देखिन्छ।
पेरिलाई जवाफ दिनुहोस्
म आईफोन and र 4.२.१ जेलब्रेक बिना कुनै समस्या बिना, समय स्वचालित रूपमा परिवर्तन भयो र अलार्महरू सही रूपमा काम गर्दछन्
Zerocoolspain लाई जवाफ दिनुहोस्
4.२.१ को साथ आईफोन jail.२.१ बिना कुनै समस्या बिना र एकलै समयमा परिवर्तन भयो। मसँग बिना प्रोग्रामिंगको अलार्म छ, म यसलाई हरेक रात सक्रिय पार्छु, मलाई थाहा छैन यदि X दिनको लागि प्रोग्राम गरिएको भए कहिले असफल हुन्छ।
M4r1n लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईएस4ओएस 4.3.1.१ को साथ छ र मसँग अलार्ममा कुनै विफलता छैन। जानकारीको रूपमा म तपाईंलाई भन्नेछु कि मेरो अलार्म सोमबार देखि शुक्रवार बिहान''6० मा सेट गरिएको छ।
फ्रान्कलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको टिप्पणीबाट के घटाइएको छ त्यसबाट, समस्या आईओएस 4.1.१ सँग हुनुपर्दछ किनभने बाँकी कुनै समस्या भएका छैनन्।
मसँग 4.2.1.२.१ छ र सबै ठीक छ।
ErMasLoko लाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, हिजो मेरो प्रिय आईफोनले मलाई एक घण्टा पहिले जगायो किनभने यो त्यस्तो लाग्यो। पछिल्लो रात मैले सबै अलार्महरू खाली गरें र तिनीहरूलाई फेरि सेटअप गरे। तर, SURPRISE !! आज बिहान उही कथा। कुनै मद्दत वा म निद्रामा क्षतिको लागि एप्पललाई रिपोर्ट गर्न सक्छु? XD
राल्फिलाई जवाफ दिनुहोस्
एउटा कुरा, ती मानिसहरू जो असफल भएका छन्, उनीहरूको आईफोन कारखानाबाट स्वतन्त्र छ वा यो कम्पनीबाट हो? यस्तो देखिन्छ कि नि: शुल्क कारखाना (जस्तै मेरो) असफल भएको छैन, वा कम्तिमा म असफल भएकाहरू को बारेमा चिन्दिन
4.1.१ सँग मैले उस्तै असफलता पाएको छु, यो एक घण्टा अघि देखिन्छ।
मेरो अलार्म धेरै दिनहरूको लागि हो (सोमबारदेखि शुक्रबार र सप्ताहन्तमा माथी)।
मैले तिनीहरूलाई मेटाउने र सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छु र यो असफल हुन्छ।
मैले समयको स्वचालित अद्यावधिक हटाउने, मेटाउने र तिनीहरूलाई सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छु, तर यो असफल पनि हुन्छ।
यदि मैले दोह्याउने एक राखें, तर एक दिनको भने, हप्ताको प्रत्येक दिनको लागि समान बनाउनको लागि, यो पनि असफल हुन्छ।
तसर्थ, या त तपाइँले त्यसलाई दिनदिनै हातले राख्नुभयो, वा तपाइँ तिनीहरूलाई एक घण्टा थप्नुभयो ... कि यदि एक दिनको रूपमा तपाइँ असफल भएन भने तपाइँ ढिला हुनुहुन्छ।
मैले अस्ट्रेलियाको F1 ग्रान्ड प्रिक्सको सुरूवात लगभग गुमाएको छु किनकी अलार्मको कारण बन्द छैन! यो मलाई आइतबार मात्र असफल भयो।
आईफोन V भोडाफोन (आईओएस 4.१)
डेभिसलाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, मसँग 4.1.१ जेलब्रेक छ र मसँग अलार्मको समस्या छ ... तिनीहरू आवाज गर्दैनन्। मँ २ लाई सोमबार देखि शुक्रवार सम्म अनुसूचित छ। यदि मैले एक विशेष समयको लागि नयाँ सिर्जना गरेको छु भने यसले समस्या बिना काम गर्दछ। मैले तिनीहरूलाई मेटाएको छु र फेरि मनोरन्जन गरेको छु, यद्यपि के भनिन्छ भने यसले समस्याहरू दिनेछ ... कुनै समाधान?
Hugo लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले याद गर्नुभयो कि जो कोही भन्छन् कि उनीहरूसँग समस्या छ, वा ती मध्ये% 99%, अझै आईओएस 4.1.१ प्रयोग गर्दछ? 4.1.१ मा जहाँ यसले हामीलाई समय ढिलाइ गर्दा समस्याहरू दिए, तर everyone.२.१ भएका सबैसँग अलार्मको समस्या छैन। मसँग आईओएस 4.2.1.२.१ संग जेल्रेक छ र अलार्म पूर्ण रूपले ध्वनि गर्न जारी छ, केहि पुनः कन्फिगर नगरी
LUIS लाई जवाफ दिनुहोस्
यसले मलाई कि त असफल गरेको छैन, र मैले पढिरहेको कुराबाट यो समस्या समाधान भएको होइन, तर त्यहाँ अद्यावधिक नभएका मानिसहरु छन् (जेलब्रेक नगुमाएकोमा), र यो फेरि असफल भएको छ, तर समस्या 4.2.1.२.१ को रूपमा तय गरिएको छ
Lisergio लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन,, 4.२.१ + जेलब्रेक = कुनै समस्या छैन।
Rivez लाई जवाफ दिनुहोस्
लगभग सबैलाई जस्तै, यो एक घण्टा अघि जस्तो देखिन्छ; मसँग आईओएस 3..१ र जेलब्रेकको साथ 4.1GS छ।
ABUELO लाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो मार्टिनो भन्यो
मसँग bre.२ जेलब्रेकको साथ छ र मैले फार्मुला १ ढिलाइ हेर्नुपर्‍यो किनभने अलार्म चल्दैन ... हो, सोमबार उसले मलाई भने कि म काममा जानु पर्छ ...
PabloMartino लाई जवाफ दिनुहोस्
म मेरो स्थितिमा टिप्पणी गर्दछु, शनिबार बिहान मेरो आईफोन version संस्करण 4..२.१ संग जेलब्रेक स्वचालित रूपमा ००:०० देखि ० 4.2.1: ०० सम्म परिवर्तन हुन्छ ... सबै कुरा ठीक छ। तथापि ... आइतवार बिहान सबेरै ... म बिहान :02: .० उठ्छु ... काममा जानको लागि र म आफ्नो आईफोनमा हेर्छु…। र :00::03० मार्क गर्नुको सट्टा, यसले मलाई यो चिन्ह लगाउँछ कि यो 00: …० छ ... मेरो मतलब, म फेरि ढिला भएँ। म उठें किनभने मसँग आईफोनबाट टाढा अर्को मोबाइल अलार्म छ तर…। मसँग समय ठीकसँग सेट गरिएको छ किनकि मँ यो म्यानुअल मोडमा छ…। यदि मैले यसलाई स्वचालित मोडमा राखें भने, यसले जाडोको समय सेट गर्दछ।
यो अरू कसैलाई हुन्छ? त्यहाँ भन्दा बढि व्यक्तिहरू छन् ... यदि कसैले समस्या कसरी समाधान गर्ने वा केही बताउने भनेर मलाई थाहा छ भने। धन्यवाद मान्छे!
एडुलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन version संस्करण 4.१ छ।
जो मेरा अलार्महरूमा विश्वास गर्न असफल भएका छन् आइतवार र मा राम्रोसँग काम गरे
सोमबार, जब सम्म म तिनीहरूलाई मेटाउदिन र फर्काउँछु, जुन एक घण्टा अगाडि बज्यो
मसँग 4.2.२+ जेलब्रेक छ ... यसको लागि कुनै समाधान? यो अर्को पटक कसरी समाधान गरियो?
हिजो आईओएस 4.3 सँग अलार्मले राम्रोसँग काम गर्‍यो, आज 4.3.1.१ को साथ यसले मलाई एक घण्टा कम चिह्न लगायो र अवश्य अलार्मले मलाई असफल गर्यो।
भाग्यवस मानव शरीरको आफ्नै जैविक घडी छ र म ठीक घण्टा र मिनेटमा उठ्छु: O
खैर, यदि मैले घडीलाई स्वचालित रूपमा सेट गरें भने यो १ घण्टा कम देखिन जारी रहन्छ, मैले घडीलाई म्यानुअल मोडमा छोड्नुपर्‍यो।
कस्तो लाजमर्दो कुरा हो, ईश्वरले धन्यवाद दिनुहोस् यी केटाले आणविक शक्ति केन्द्र वा अन्तरिक्ष रकेट कार्यक्रम गर्दैनन्।
मैले यसलाई फोरममा भनेको थिएँ र उनीहरूले मलाई ध्यान दिएनन्। अलार्महरू मेटाएर तिनीहरूलाई अघिल्लो अवसरहरूमा पुन: निर्माण गरेर फिक्स गरिएको छैन। मलाई wake मा ब्यूँझनका लागि मैले यसलाई ring मा सेट गर्नुपर्‍यो, तर म डराउँछु कि उनीहरू आफैं ठीक हुनेछ र ढिलो हुनेछन्।
Chufirulo लाई जवाफ दिनुहोस्
मार्च st१ मा, अलार्म एक घण्टा अघि बज्न जारी रहन्छ !!!!!
मैले अलार्महरू खाली गरेको छु, फोन पुनःबुट गर्‍यो र केही पनि छैन।
मलाई के भन्ने मलाई एप्पल स्टोरमा जानु पर्छ।
Bcnblue लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको टिप्पणीका लागि धन्यबाद।
मसँग आईफोन version संस्करण 4.१ पनि छ र साप्ताहिक अलार्मले मलाई असफल गरिरहेको थियो। म आज कामको लागि ढिलाइ गर्दैछु ... म यसलाई अपडेट गर्नेछु र आशा गर्दछु यो ठीक भयो।
हो, समय परिवर्तन भएपछि, मेरो आईफोनले मलाई यो भन्दा एक घण्टा पहिले उठाउँछ। मैले अलार्मलाई पुन: प्रोग्राम गरेको छु। मैले यो अलार्म असक्षम गरेको छु। मैले नयाँ अलार्म ट्रिगर गरेको छु र यसले उस्तै गरिरहन्छ।
अविश्वसनीय छ कि तिनीहरूले यसलाई भर्खरको मोबाइल आश्चर्यको रूपमा बेच्छन् र केही आधारभूतमा असफल हुन्छन्।
एप्पल आईफोन प्रोग्रामरहरूको लागि नाडीमा थप्पड। जे होस् यी टर्मिनलहरूको मूल्यको लागि, तिनीहरू उपभोक्ताहरूबाट मागको योग्य छन्।
भिक्टरलाई जवाफ दिनुहोस्
अर्को पटक यो समाधान भयो जब उनीहरू अमेरिकामा समय परिवर्तन गर्छन् के कसैलाई थाहा छ तिनीहरू कहिले समय परिवर्तन गर्छन्?
SNY लाई जवाफ दिनुहोस्
रुबी आरओ भन्यो
मेरो आईफोन पनि त्यस्तै हो मैले पहिले एक घण्टा ब्यूँताएँ, अब म मेरो सबै अलार्म प्रोग्रामिंग गरिरहेको छु एक घण्टा ब्यूँझनको लागि पर्याप्त समयको लागि मलाई चाहिन्छ, जबसम्म तिनीहरू आईपुग्न सकिनन् ??? तपाईले एप्पललाई सफाइ दिन चाहानुहुन्छ यो सफल हुँदैन जुन हामी एक सपुलर एप्लिकेसनका लागि तिर्दछौं र त्यो सही काम गर्दैन, म मन्टेरे एनएल मेक्सिकोबाट हुँ।
रुबी आरओ लाई जवाफ दिनुहोस्
केल्विस 80० भन्यो
नमस्ते, म भेनेजुयलाबाट छु, मसँग आईओएस 4.2.1.२.१ छ र अलार्मले राम्रो काम गर्यो, अब इस्टर पछि यो प्रोग्राम भएपछि आधा घण्टा लाग्छ, यदि मैले यसलाई सोमबारबाट शुक्रवार वा केही दिनसम्म राखें ... ताकि मैले बोलेको समयमा यो मलाई लाग्थ्यो, मैले दिनहुँ तालिका बनाउनुपर्थ्यो, भन्नुपर्दा, दिनदिनै ... मलाई अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने भेनेजुएलाले केही समय अघि आधा घण्टाको लागि समय क्षेत्र परिवर्तन गर्‍यो। र म कल्पना गर्छु कि त्यहाँ असफलता आउँछ ... अभिवादन!
Kelvis80 लाई जवाफ दिनुहोस्
यो शानदार र अचम्मको छ
Aldi लाई जवाफ दिनुहोस्
यहाँ कसैलाई थाहा छ कि लगभग सबै असफल गर्नेहरूले जेलभ्रेक गरेका छन्? सम्भवत कसैले उपकरण ह्याकि after पछि एप्पललाई दोष दिन सक्छ। जब हामी जेलब्रेक गर्छौं यसले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि केहि असफल हुन सक्छ, किनभने त्यो तिनीहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ।
Pablo लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, मसँग 3G मा जेलब्रेक छैन र म पनि असफल
मेरो अनलक गरिएको 3G जी 4.1.१ हो र यदि मैले यसलाई १ पटक मात्र बजाउँदछ भने यो राम्रो हुन्छ तर यदि म यसलाई साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम गर्छु भने यसले यसलाई नराम्रो गरी दिन्छ म विदाई १ घण्टा अघि भन्दछु।
मारियोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई हुन्छ कि साप्ताहिक सूचनाहरूसँग जुन म क्यालेन्डरमा छ, यसले मलाई एक घण्टाको सूचना दिन्छ। मँ यो मिति र समय सेटिंग्स मा, स्वचालित समायोजन गरेर हो।
Emilio लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन have छ म कोस्टा रिकाबाट आएको हुँ र मसँग अलार्मको समस्या आएको छ हरेक चोटि बज्यो, मोबाईल स्टिक भयो, बन्द हुँदैन, यसले प्रतिक्रिया गर्दैन र यो वाइब्रेटर मोडमा बज्यो, आधा घण्टा बित्दछ जबसम्म ऊ नपुग्दैन केवल ठीक गर्दछ कि, यो २ दिन पहिले भयो
कार्मेनलाई जवाफ दिनुहोस्
WTF ?! भन्यो
मिति जाँच गर्नुहोस्! के तपाईं देख्न सक्नुहुन्न कि आईफोन even अवस्थित थिएन?
WTF लाई जवाफ दिनुहोस् ?!
गेभी-सिम अनलक गर्ने कार्ड अवैध छ
अफवाह: नयाँ आईफोन मा आर्द्रता सेन्सर हुँदैन